आईफोन १३ को लन्च अघि एप्पललाई झट्का ! ८२ प्रतिशत प्रयोगकर्ताहरु किन्न रुचि राख्दैनन् - Technology Khabar
» ताजा समाचार » आईफोन १३ को लन्च अघि एप्पललाई झट्का ! ८२ प्रतिशत प्रयोगकर्ताहरु किन्न रुचि राख्दैनन्
आईफोन १३ को लन्च अघि एप्पललाई झट्का ! ८२ प्रतिशत प्रयोगकर्ताहरु किन्न रुचि राख्दैनन्
Technology Khabar १६ भाद्र २०७८, बुधबार
एप्पल आईफोन १३ श्रृंखलाको प्रतीक्षाको करिब करिब अन्त्यमा छ। यो सिरिज सेप्टेम्बरमा १४ मा सार्वजनिक हुने अनुमान छ।
यसैबिच कम्पनीको लागी यसको सुरुवात भन्दा पहिले नै नराम्रो खबर आएको छ। वास्तवमा, एउटा सर्वेक्षणले आईफोन १३ सिरिजको सन्दर्भमा प्रयोगकर्ताहरुमा धेरै क्रेज नभएको दाबी गरेको छ। यसका धेरै कारणहरु छन् तर सबैभन्दा ठूलो कारण इनडिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर नदिनु हो।
५ हजार मानिसहरुमा गरिएको सर्वेक्षण
सेलसेल (SellCell) द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षणमा, १८ बर्ष भन्दा माथिका पाँच हजार एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरुलाई यसको बारेमा सोधिएको थियो, ती मध्ये लगभग ८२ प्रतिशत आईफोन १३ मा धेरै चासो देखाएनन्।
यस सर्वेक्षणमा १८ प्रतिशत जनताले मात्र आईफोन १३ किन्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। अर्कोतर्फ, यदि हामी अघिल्लो बर्षको बारेमा कुरा गर्दा सो वर्ष २०२० मा, एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरुको ३३ प्रतिशत संख्याले आईफोन १२ किन्न चाहन्थे।
सर्वेक्षणमा, जब यी प्रयोगकर्ताहरुलाई आईफोन १३ मा कम रुचीको बारेमा सोधिएको थियो, एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरुमध्ये ३२ प्रतिशतले भने कि कम्पनीले आईफोन १३ मा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट रीडर प्रदान गर्दैन र यही कारण हो कि प्रयोगकर्ताहरु यो किन्नका लागी उत्साहित छैनन्।
यद्यपि कम्पनीले पहिले आईफोन १३ मा यो सुविधा दिने कुरा गरेको थियो, तर पछि कम्पनीले यस्तो सुविधा नदिने जानकारी थाहा भएको छ।
आईफोन १३ को मूल्यको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एप्पलले यसलाई कम मूल्यमा ल्याउनेछ। रिपोर्टहरु को अनुसार, आगामी श्रृंखलाको मूल्य आईफोन १२ को भन्दा कम हुनेछ। आईफोन १३ को ४ जीबी र्याम भेरियन्टको मूल्य न्यूनतम ९७३ अमेरिकी डलरबाट शुरु हुने बताईएको छ ।एजेन्सीहरु
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७८, बुधबार
ओपोको नयाँ स्मार्टफोन एफ१५ जनवरी १६ मा लन्च हुँदै, ४८ मेगापिक्सेलको क्वाड क्यामरा सेटअप
वनप्लसको नयाँ कन्सेप्ट फोन चाँडै लन्च हुने, गायव हुनसक्ने ट्रिपल रियर क्यामरा डिजाइन
एप्पलले घोषणा गरेको एप्पल कार्ड आगामी महिना बजारमा आउने
८ जीबी र्याम, ड्यूल क्यामरा, वायरलेस चार्जिगसहित साओमी मि मिक्स २एस सार्वजनिक
१३ चैत्र २०७४, मंगलवार
चिनियाँ स्मार्टफोन मेकर शाओमीले भारतमा १० करोड स्मार्टफोन बेच्यो, रेडमी सिरिज निकै महत्वपूर्ण
सामसंगको ‘रिफर्बिस्ड’ स्मार्टफोनहरुको बिक्री शुरु, अमेरिकी वेबसाइटमा लिस्टेड
ट्विटरमा चाँडै २८० भन्दा बढी क्यारेक्टरको सीमा पाउन सकिने, नयाँ सुविधाहरु रोलआउट हुँदै